YEMEN: Ubad milyan kor u dhaafaya oo halis ugu jira macaluul - Halbeeg News
SANCA (HALBEEG) – Hay’adda caalamiga ah ee Save The Children, ayaa ka digtay xaalad halis ah oo ay ku sugan yihiin carruur tiradoodu hal milyan kor u dhaafayso oo ku nool dalka Yemen, kuwaas oo qarka u saaran in ay macaluul darteed u geeriyoodaan, halka in ka badan 5 milyan oo kalena ay wajihi doonaan xaaladda macaluusha.
Agaasime Ku Xigeenka Save The Children Helle Thorning-Schmidt, ayaa sheegtay in ubadka Yemen oo markii horeba nafsaddoodu khatar weyn ugu jirtay duqeymaha iyo cudurrada faafa sida koleeraha, hadda ay ugu sii darsantay xaaladda macaluusha, oo ay ku tilmaantay ‘mid aad looga argagaxo’.
“Malaayiin carruur ah ayaan garanaynin marka xigta ee ay wax cuni doonaan” Helle ayaa tiri iyadoo sii raacisay “Mid kamid ah isbitaallada Yemen ee aan booqday, carruurtu xataa ma awoodi karin inay ooyaan, jirkoodu wuxuu ahaa mid macluushu daashatay”
Dagaallada ka socda qaybo kamid ah dalka Yemen ayaa sababay in hoos u dhac aad u wayni ku yimaado qiimaha lacagta dalka Yemen, taas oo horseeday sare u kac ku yimid qiimaha lagu kala iibsado maciishadda daruuriga ah gaar ahaan raashinka, iyadoo malaayiin qof oo dadka Yemen ahi xilligan awoodi karin in ay saddexda waqti wax cunaan.
Xaaladda ayaa sii murugtey kaddib markii ay dagaalka dartiis u xirmatay dekedda magaalada Xudeydah, dekeddaas oo ahayd midda ugu weyn ee gargaarka bini aadamnimada dalka Yemen laga gelin jiray.
Muuqaallo argagax leh oo ku saabsan xaaladda macaluusha ee ka jirta dalka Yemen oo lagu baahiyey baraha bulshada, waxaa kasoo muuqday qoysas Yamaniyiin ah oo carruurtooda u karinaya caleemaha dhirta, maadaama aysan haynin wax kale oo ay siiyaan.
Qaramada Midoobay ayaa shaacisay in dad tiradoodu 10,000 ka badan tahay ku geeriyoodeen colaadda dalka Yemen, dadkaas oo saddex meelood marka loo dhigo, labo kamid ahi rayid ahaayeen.
Sarkaal ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka oo lagu dilay Baladweyne